Afaan Oromoo	Dhala namaa bineensotaa fi uumama lubbu qabeeyyii kanneen biroo irraa waan adda baasan keessaa inni tokkoo fi guddaan afaan ykn jecha ittiin dubbatee waliif galu qabaachuu isaati. Kanas Waaqatu eebbisee ittiin uume. Bineensonnis jecha akka ilmaan namaatti ittiin dubbatan yoo hin qabaannellee, sagalee ittiin waliif galanii fi walhubatan niqaban.
Afaan Oromoos, qooqa Waaqayyo ummata Oromoof kennee ittiin uume, damee afaanota warra Kuush keessaa isa guddaa fi bal’aa ta’uu seenaan barreeffamaa turan ni addeessan. Haa ta’u malee afaan ummata guddaan dubbatamu kun afaan hojii fi barreeffamaa akka hin taaneef sirnoota bulchiisa biyyattiin ugguramee bara dheeraaf afaan dubbii qofa ta’ee akka turuuf gaadi qabamee ture. Sababa kanaaf Afaan Oromoo aadaa fi amantii Oromoo waliin walitti hidhatee akka hinguddanne, hin mul’annee fi akka tuffatmu godhamuun roorroon daangaa hinqabne irra gahe.
Galanni guddaan Waaqaa fi sabboontota Oromoo kanneen afaan kun afaan hojii akka ta’uuf itti wareegamaniif haa ta’u malee har’a gaadii keessa turerraa furamee, qubee barreeffamaa isaaf ta’u argatee afaan hojii fi barreeffamaa ta’ee jira. Bara 1991 irraa eegalee barruuleen, kitaabotaa fi gaazexoota hedduutu afaan kanaan bahaa turan. Ummanni afaan isaan barreessuu fi dubbisuu hawwaa tures dheebuu kana bahuuf dirmannaa cimaa godhe. Akka yeroo sana jalqabetti hojiin isaa osoo itti fufeera ta’ee silaa yeroo ammaatti kitaabotaa fi barruuleewwan dhibbootaan lakkaawanitu bahuun irra ture. Garuu dhibbaan lakkaawuun hafee tokkoo isaa ijaan arguuf iyyuu ”simbirroo masqalaa” nutti ta’aa jira. Sababni isaa maali? Alagaa moo ofi komanna yoo jedhame deebiin isaa lamaanuu ni ta’a. Dhiibbaan karaa sirnaa fi bulchiinsa alagaa akkuma jirutti ta’ee, nutis waan keenya guddifachuuf qooda nurraa eegamu bahuu dhabuun wal komachuun keenya waan hin oolle,
Komii kanaaf sababoota hedduu waliif tarreessuun ni danda’ama. Garuu kun furmaata miti. Waanti godhamuu qabu isa dabre qaabannee isa dhufuuf waa qiyyaafachuu waan qabnuuf fuula dura guddinaa fi dagaagina afaan kanaaf har’a maal gumaachuu dandeenya? Tokko tokkoo keenya irraa maaltu eegama? kan jedhu ofi gaafachuu fi deebii isaas ofumaa barbaaduu qabna.
Akka akeeka GWAtti afaan kanaaf waanti gumaachuu yaallu, afaan kun hog-barruu fi barreeffamaan akka guddatuuf marii fi qorannoof yaada dhiheessuu, akkasumas waltajjii marii qopheessuudha. Gama biraan jechoota Oromoon bar dur itti fayyadamaa ture, kan dagataman ykn yeroo ammaa hiika isaa hin beekne kan maqaa lafaa, gosaa fi namaa ta’anii fi hiika isaa hin beekne galmeessuu fi hiikota isaanii barbaaduu, kana malees Galma warra Qaalluu, Qe’e warra Abbaa Gadaa fi warra ayyaantuu adda addaa biratti jechoota dubbataman, wallee wallifaman, faaruu faarfamanii fi sirboota yeroo gara garaatti sirbaman sirriitti qalbeeffachuun jechoota achi keessa jiran osoo safuu fi laguu isaanii hin cabsiin hiikaa fi dhaamsa ykn barumsa isaa hubachuun barruu adda addaaf akka tahu gochuudha. Akkasumas Abbootiin keenya akka har’aa barumsaa fi quunnamtii jabaneen osoo hin qaroomiin Mammaaksa, Sheekkoo, Oduu durii, Hiphoo fi wkf keessaan dhaamsa ykn barumsa isaan nuuf dabarsan qorachuu fi hojii ammayyaaf gumaacha akka kennuuf hayyoonni afaanii akka irratti hojjetan kakaasuu fi jajjabeessuu, dhaloonni har’aa ammoo dhaloota eger-boriif waan dhaalchifnu itti yaaduu akka qabnu hamilee fi yaada waliif kennuudha.
Waan kana fuula dura hayyoota Afaan Oromoo waliin qindeeffachuun sagantaa marii fi barnootaa akkaataa namoonni qooda irraa fudhatanii fi barumsa walirraa argatan qindeessuuf tattaafanna. Kanaafis Waaqayyo nu haa gargaaru !